Sary Miloko Mampiseho Ny Ady Teo amin’ny Tafika Amerikana sy Japoney tao Okinawa Nandritra Ny Ady Lehibe Faha-II · Global Voices teny Malagasy
Sary Miloko Mampiseho Ny Ady Teo amin'ny Tafika Amerikana sy Japoney tao Okinawa Nandritra Ny Ady Lehibe Faha-II
Mba hanamarihana ny tsingerintaonan'ny Ady tao Okinawa, nandefa sary miloko tao amin'ny Twitter ilay mpikaroka Japoney, Hidenori Watanave.
Voadika ny 12 Avrily 2017 14:08 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Português, English
Pikantsary avy amin'ny Tahiry Nomerika Okinawa.
Nanamarika ny tsingerintaona faha-72 nanombohan'ny ady tao Okinawa ny 1 Aprily 2017, raha niditra tao amin'ny nosy Okinawa nandritra ny Ady Lehibe Faha-II ny tafika Amerikana. Miaramila Amerikana efa ho 290.000 no nandray anjara tamin'ny fanafihana an'i Okinawa niady tamin'ny miaramila Japoney miisa 150.000. Sambany ny miaramila Amerikana no niady tao amin'ny tany Japoney tamin'izany fotoana izany. Amerikana maherin'ny 20 000 no maty nandritra ny ady tao Okinawa, raha maherin'ny 100.000 ny miaramila Japoney namoy ny ainy. Nandritra ny ady , tombanana ho sivily Okinawa 150.000, avy amin'ny mponina 300.000 talohan'ny fanafihana no novonoin'ny tafika Japoney sy Amerikana.
Notantanan'i Etazonia hatramin'ny 1972 i Okinawa. Natao toby miaramila Amerikana nandritra ny ady tao Vietnam ny nosy, ary ny fisian'ny Amerikana ao Okinawa dia mbola mitohy mandraka androany. Amin'ireo mponina 1,4 tapitrisa ao Okinawa, Amerikana ny 100.000 mahery – ny ankamaroan'izy ireo dia miaramila sy mpiasan'izy ireo na mpiasa sivily ao amin'ny Sampan-draharahan'ny Fiarovana.
Noho ny tsingerina faha-72 taonan'ny ady tao Okinawa, nanoratra karazana lahatsoratra tao amin'ny Twitter ilay mpikaroka Japoney, Hidenori Watanave, izay mampiseho sary tahiry tamin'ny ady ary nolokoina tamin'ny fampiasana fitaovana rindrambaiko noforonin'ireo mpikaroka ao amin'ny Oniversite Waseda ao Japana. Nitarika tetikasa fametrahana an-tsarintany vaovao maro tamin'ny aterineto i Watanave, anisan'izany ny fandraketana an-tsarintany ny tantara am-bava tamin'ny fanafihan'ny Japoney an'i Pearl Harbor tamin'ny 7 Desambra, sy ny sarintany ifarimbonana misy ny baomba atomika an'i Hiroshima sy Nagasaki.
72 taona lasa androany no nanombohan'ny fitsofohan'ny Amerikana tao amin'ny nosy Okinawa. Ny torapasika fiantsonana tazanina ety an-tany. Sary nolokoin'ny tambajotra neural.
Maro tamin'ireo sary nolokoina tamin'ny Ady tao Okinawa Watanave navoaka tao amin'ny Twitter-ny no avy amin'ny Tahiry Nomerika Okinawa, tetikasa fandraketana an-tsarintany amin'ny aterineto, tahaka ireo tetikasa hafan'i Watanave, izay mametraka sary sy fijoroana vavolombelona amin'ny sarintany.
72 taona androany no nanombohan'ny fitsofohan'ny Amerikana tao Okinawa. Ao afovoan'ny sary ny vinanin'ny Renirano Hija (toeram-piantsonan'ny Amerikana indrindra). Sahan-tseranana an'habakabaka Yomitan ny eo ankavia. Sary nolokoin'ny tambajotra neural.
Mikasika ny Ady tao Okinawa, nisioka sary tamin'ny daty nangalàna azy ireo 72 taona lasa i Watanave.
72 taona androany. Sary nalaina 43 minitra taorian'ny fiantsonana, nijanona teo amoron'ny Torapasika Mavo ny fiara mifono vy tsy mataho-drano. Sary nolokoin'ny tambanjotra neural.
Manome fomba fijery malaza mikasika ny zava-nitranga nandritra ny Ady tao Okinawa ny sary:
72 taona androany. Tafika Amerikana ao amin'ny seranam-piaramanidina kely ao Yomitan tamin'ny andro nidiran'izy ireo. Vondrona fiara mifono vy Amerikana mandeha (an-tanety). Sary nolokoin'ny tambajotra neural.
72 taona androany – Kakazu Ridge, sary nalaina tamin'ny 9 Aprily 1945. Kakazu Ridge no nanamarika ny nanombohan'ny ady mahery vaika indrindra tamin'ny Ady tao Okinawa, ka tafika Japoney 64.000 fara fahakeliny ary Amerikana 24.000 no namoy ny ainy.
Nandoko sary mahatalanjona vitsivitsy ihany koa i Wataneve, tahaka ny filentehan'ny sambo mpiady Yamato, sambo lehibe indrindra tsy mbola nisy toy izany tamin'izany fotoana izany.
72 taona androany. Ny sambo mpiady Yamato ao anatin'ny fanafihana an'habakabaka teny an-dalana hiady tamin'ny Ady tao Okinawa.
72 taona androany. 7 Aprily 1945. Nilentika tao amin'ny ranomasina atsimon'i Kyushu noho ny balan-tsambo maromaro tamin'ny 2:20 folakandro raha teny an-dalana ho any amin'ny Ady tao Okinawa i Yamato, sambo mpiady lehibe indrindra teo amin'ny tantara.
Mampiseho sary nolokoina taorian'ny ady ihany koa ny siokan'i Watanave:
72 taona androany. Tao amin'ny seranam-piaramanidina kely ao Okinawa, nijery ireo fitaovam-piadiana Japoney simba nandritra ny fanafihana tampoka ny tafika Amerikana.
Nahitana ireo sivily niharan'ny habibian'ny tafika Amerikana sy Japoney ihany koa ny Ady tao Okinawa. Mandrakitra izany zava-niainan'ny sivily tamin'ny ady izany ireo tahiry Nomerika Okinawa avy amin'i Watanave ary azo jerena ao amin'ny okinawa.mapping.jp. Loharanom-baovao tsara mikasika ireo tantara ireo ihany koa ny boky Fidinana any amin'ny helo: Fahatsiarovana sivily momba ny ady tao Okinawa tamin'ny gazety Ryukyu Shimpo momba an'i Okinawa.
Jereo ireo fijoroana vavolombelona, sy sary ary ny toerana nahafatesan'ny olona nandritra ny Ady tao Okinawa. Niantsona tao Okinawa 72 taona lasa androany ny tafika Amerikana (1 Aprily 2017), ka jereo azafady.
Fanampin'izany, afaka mampiasa ny tambajotra neural an'ny Oniversite Waseda, fitaovana fandokoana sary mandeha ho azy ato ny rehetra.